-Dhacdo China FK816 Automatic Double Head Corner Shaabadeynta Sumadaynta mashiinka calaamadaynta warshadda iyo alaab-qeybiyeyaasha |Fineco
② FK816 wuxuu gaari karaa filimka laba geesoodka ah ama calaamadeynta calaamadda, oo si ballaaran loogu isticmaalo warshadaha qurxinta, elektiroonigga, cuntada iyo baakadaha
2. Shaqada quudinta tooska ah (oo lagu daray tixgelinta alaabta);
FK816 waxay ku habboon tahay dhammaan noocyada qeexitaannada iyo sanduuqa texture sida sanduuqa telefoonka, sanduuqa qurxinta, sanduuqa cuntada ayaa sidoo kale calaamadayn kara alaabta diyaaradda, tixraac faahfaahinta FK811.
FK816 waxay gaari kartaa summeynta filimka labanlaaban, calaamadeynta daboolka buuxa, calaamadeynta qayb ahaan sax ah, calaamadeynta calaamado badan oo toosan iyo calaamado calaamado badan oo toosan, oo si ballaaran loogu isticmaalo warshadaha qurxinta, elektiroonigga, cuntada iyo warshadaha alaabta baakadaha.
FK816 waxay leedahay hawlo dheeraad ah oo lagu kordhinayo:
daabacaha koodhka qaabeynta ama daabacaha khad-jet, marka la calaamadiyo, daabac lambarka dufcada wax soo saarka cad, taariikhda wax soo saarka, taariikhda dhaqangalka ah iyo macluumaadka kale, koodhaynta iyo calaamadaynta ayaa la fulin doonaa isku mar.
daabacaha qaabeynta, beddel waxa ku jira daabacaha wakhti kasta, garwaaqso shaqada daabacaadda iyo calaamadaynta isku mar.
Shaqada quudinta tooska ah (oo lagu daray tixgelinta alaabta);
Shaqada ururinta alaabta tooska ah (oo lagu daray tixgelinta alaabta);
Kordhi qalabka calaamadaynta;
Dhulka dabaqa ah ee FK816 qiyaastii 2.35isteerin.
Isbeddelka Taageerada Mashiinka.
Mashiinka calaamadaynta laba-geesoodka ah ee FK816 wuxuu leeyahay habab fudud oo hagaajin ah, saxnaanta calaamadaynta sare iyo tayada wanaagsan, Lagu dabaqi karo shuruudaha saxnaanta sare, alaabta wax soo saarka sare leh, wayna adagtahay in qaladka lagu arko indhaha qaawan.
Awoodda (kumbuyuutar / daqiqo) 40 ~ 100
Cabbirka alaabta suuit (mm) L: 20 ~ 300 W: 20 ~ 250 H: 10 ~ 100; waa la beddeli karaa
Cabbirka summada suudhka (mm) L:15-200;W(H):15-130
Cabbirka Mashiinka (L*W*H) ≈1450*1250*1330(mm)
Cabbirka Xidhmada (L*W*H) ≈1500*1300*1380(mm)
Habka ilaalinta tareenka
Loo isticmaalo in lagu hago jihada alaabta
Halbeegyada hawlgalka iyo dejinta
Dhig qaabaynta elektarooniga ah
loo isticmaalo in lagu hagaajiyo booska kor iyo hoos ee madaxa calaamadaynta iyo hagaajinta booska calaamadaynta;
Matoor jiid jiid lagu wado si loo sawiro summada
Habka la qabsiga
La hagaajiyay badeecada si uu badeecada uga dhigo mid ku siman suunka qaada si loo hubiyo saxnaanta calaamadaynta
Habka dib u warshadaynta
warqadda hoose ee summada dib u warshadaynta.
Ka saar calaamadda
ka fuji calaamadda.
Dabaysha duubka calaamadda
rakib shidma bartilmaameedka, dhaqaaji dareemaha gadaal iyo gadaal.
Hagaajinta dhererka habka sareynta
hagaajin booska kor iyo hoos ee habka kor u qaadista.
Cidhifka calaamadda ku dheggan qaybta shaqada ayaa si adag loo riixaa.
loo isticmaalo in lagu hagaajiyo booska alaabta oo lagu dejiyo calaamadda.
Waxa loola jeedaa in mishiinka calaamadaynta uu shid yahay.
3. Marka dareemaha uu ogaado in alaabtu ay gaadheen goobtii loogu talo galay, mishiinku waxa uu soo diri doona calaamada oo rullalulatu waxa ay ku xidhaysaa badhkii calaamada alaabta.
4. Kadib marka alaabta la calaamadiyo oo la gaadho meel cayiman, buraashku wuu soo baxayaa oo buraashi doona badhkii kale ee calaamada alaabta, wuxuu gaadhay calaamadaynta geesaha.
Hore: FK815 Mashiinka Calaamadaynta Calaamadaha Geeska oo toos ah
Xiga: FK909 Semi otomaatig ah oo laba-geesood ah oo calaamadeynaya
Mashiinka calaamadaynta tooska ah ee sanduuqa geeska
Mishiinka calaamadaynta geeska sanduuqa
Mashiinka calaamadaynta geeska Kartoon
Mashiinka Xidhitaanka iyo Calaamadaynta Geeska
Mashiinka calaamadaynta gees laba jibaaran
Mashiinka calaamadaynta laba-dhinac
Mashiinka calaamadaynta geeska oo hufan
Mashiinka calaamadaynta geeska ee gacanta
Mashiinka calaamadaynta calaamadaynta PET
Mashiinka calaamadaynta calaamadda PVC
Mashiinka Calaamadaynta Filimka
shaabadeynta mashiinka usha filimka
shaabadeynta mashiinka calaamadaynta laba dhinac